Ogaden News Agency (ONA) – Maamulka Jaaliyadda Finland iyo ururka dhalinayarada OYSU oo soo gabagabeeyay shir muhiim ah
Maamulka Jaaliyadda Finland iyo ururka dhalinayarada OYSU oo soo gabagabeeyay shir muhiim ah
Waxaa maanta shir isugu yimid gudiyada jaaliyada dalka Finland iyo maamulka Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda –OYSU-. Shirka ay labada maamul isugu yimaadeen wuxuu ka dhacay xarunta jaaliyada S.Ogadenia ee dalkan Finland.
Waxaa shirka ay maamulada isugu yimaadeen looga hadlay arimo badan oo waxtar u leh halganka uu shacabka Soomaalida Ogadenia ku doonayo aay-katashiigiisa inuu u madax banaanaado ee Jwxo hormuudka ka tahay.
Shirku wuxuu bilowday abaarihii 3:00 galabnimo. Waxay gudiyadu isla meeldhigeen kor u qaadida wada shaqaynta maamulada OYSU iyo jaaliyadda, wacyi gelinta bulshada S.Ogadenia ee ku dhaqan dalka Finlad. Waxaa kaloo laysla meel dhigay qorshe sanadeedyada OYSU iyo jaaliyada ee sanadkan 2013 iyo sidii loo hergelin lahaa barnaamijyadaas. Waxaa kaloo lagaga hadlay arimo badan oo muhiim u ah halganka iyo bulshada Somaalida Ogadenia eek u nool dalka Finland.
Shirka ay labada dhinaca isugu yimadeen ayaa kusoo dhamaaday sidii loogu talo galay dhamaanna laysku raacay qodobadii laga hadlay